Lacagtii Dahabka ee boqortooyadii Cabaasiyiinta oo 1,100 sano ka dib la helay | Gaaroodi News
Lacagta dahabka ee la aasay wuxuu culeyskeedu yahay 845g (30oz)
Dhallinyaro si iskood ah gacan uga geysanaya in la qodo meelo taariikhi ah oo ku yaalla Bartamaha Israa’iil, ayaa waxay heleen 425 shilin oo dahab ah oo lagu aasay meel dhoobo ah. Waxaa la qiyaasayaa in 1,100 sano ka hor halkaas lagu aasay.
“Qofkii lahaa dhaqaalahan ee 1,100 sano ka hor aasay, waxaa suuragal ah inuu rabay in uu dib ugu soo noqdo, xitaa doonta wuu adkeystay si aysan u dhaqaaqin,” sida ay sheegeen agaasimeyaasha dhallinyarada soo quftay dahabta ee lagu kala magacaabo Liat Nadav-Ziv iyo Elie Haddad. Waxay hadalkaas ku sheegeen qoraal ay soo saareen. Oz Cohen oo ka mid ah dadka si iskood ah arrintan uga shaqeeyay wuxuu sheegay in markii hore uu moodeyay caleen yaryar, ka dib ayuu soo saaray dahabka.